I-7 Best Guitar Tuners Yokuthenga ngo-2018
Iwebhu & Usesho
Okuhamba phambili kweWebhu
Imeyili & Imibiko
Amathiphu we-Outlook namaTricks
Amathiphu we-Gmail namasu
Amathiphu we-Yahoo & Tricks
Isofthiwe nezinhlelo zokusebenza
Isipele & Izinsiza
I-TV & Ithebula Lasekhaya
Ukuthenga Iziqondiso Amajethi
by Jay Schneider
Qinisekisa ukuthi yonke i-strum inikeza umsindo ophelele
Ngokombono othile, umshini wokudlala isiginci ungumshini obaluleke kunawo wonke umshini wegitare ongathenga. Cabanga ngakho ... kungakhathaliseki ukuthi ugijime kangakanani, zingaki ama-amps, ama-guitar angakanani ama-fancy - uma isiginci sakho singekho noyedwa ongathanda ukukulalela udlala. Kwezinga elithile, i-tuner iyinhlangano yokuvula, ngakho-ke ungazibuza ukuthi yini okumele uyihlole? Ingabe udinga ukuchitha okuningi, noma ngenxa yalolu daba, ngisho nokucwaninga imikhiqizo? Yebo, silapha ukukutshela ukuthi kuningi okufanele ucabangele. Kungakhathaliseki ukuthi itanki ye-pedal tuner, i-standby egcwele-ebonakalayo noma inombolo yesikhala esiphezulu isikhala, ama-tuners ahambe kude kusuka emafolokheni wokuhlela. Kungakhathaliseki ukuthi uhla lwamanani akho, noma iyiphi into kulolu hlu izokugcina isiginci sakho sivumelane nokufunda okunamandla kwe-pitch nokusebenza okunokwethenjelwa. Ngakho funda ukuze uthole umhlabeleli ongcono wokuthenga isiginci ukuthenga namhlanje.
Ukhilimu wesitshalo sezinsimbi zokudoba yi-TC Electronic yakamuva ye-tuner model. Umshini wePolitune waqaliswa ngokukhohlisa kancane kancane, futhi i-iteration yesithathu inikeza ezobuchwepheshe obufanayo. Njengegama lisho, i-Polytune 3 empeleni izokunikeza idatha yokulungisa imitha kuzo zonke izintambo zegitala yakho ngesikhathi esifanayo. Usika zonke izintambo ezivulekile ku-guitar yakho, futhi isibonisi sibonisa amamitha ayisithupha ngesikhatsi esifanayo ngesibonakaliso esisheshayo sokuthi zibukhali kangakanani noma zithinta kangakanani lezo zingcingo. Yisici se-flagship ku-tuner, futhi isebenza kahle.
Kodwa lokhu kuhamba kancane akuyona i-pony eyodwa yokukhohlisa. Ungayifaka kwimodi yokuhlela evamile usebenzisa inkinobho encane ohlangothini futhi izokunika indlela yokugqoka ejwayelekile yocingo ngesikhathi esisodwa. Yini engcono kakhulu ngalokhu i-pedal ihlinzeka ngamamodi amabili okulinganisa okulungiselelwa kwezintambo ezilodwa - ukubukeka kwesaliti ejwayelekile kanye nokuhlelwa kwe-strobe. Ngokuvamile, izilungiselelo ze-strobe zivame ukuba ziqondile kunalokho ngoba zibona ngokucacile ukuthi ukuphuma kwesigaba nokukhishwa kwezintambo kuwukuthi, kunokuba ihumushe leyo mininingwane kumamitha adicilelwe. Kodwa ungasebenzisa noma iyiphi inketho. Uma kuvinjelwe, i-tuner inikeza ukuguqulwa okungokoqobo okungaxhunyiwe, okungenakuguqulwa kweqiniso, ngakho-ke kuyisicathulo esingeke sisidle ngezwi lakho, futhi liyi-micro pedal ngakho ngeke kuthathe isikhala esiningi.
I-Korg ikhona emdlalweni we-tuner kusukela ngaphambi kokuba ipholile ukwenza izinyathelo ezikhanyayo ngezici zesikhathi seminyaka. I-tuners yabo ye-instrument instruments iyimishini yobudala eyohlala iminyaka edlule ngaphambi kokufa. Umzila wabo we-Pitchblack we-guitar pedals uye wenza isimangalo embonini ye-pedal tuner, kanti isitoreji samanje esisha yengeze entsha okufanelekile ukubukeka uma udinga i-tuner entsha. Okokuqala, yinkimbinkimbi encane ehlose ukukhulula u-rig estate, okuyimfuneko enkulu kunoma yikuphi ukuthenga kwe-tuner. Ihlinzeka ngokunemba kokulungiswa kwe-Korg nokuzama kweqiniso kwe-Korg njengokuseduze kwe-+/- 0.1, okuyinto esiseduze kunamanye amathrekhi amaningi okuhanjiswa ngaphandle. I-bypass yangempela ukushiya ithoni yakho yedwa ngokuphelele, futhi.
Kodwa esinye sezici ezithokozile ongase ungacabangi lapha ukuthi yi-DC amandla noma amandla asebhethri - ngokuvamile ama-micro pedal awakhulu ngokwanele ukuze afake ibhetri ye-9V. Okokugcina, bakhele kulokho abiza ngokuthi Ukulungiswa Kwendlela Yokulungisa, ngakho-ke ungayilungiselela noma ikuphi isimo sakho sokuhlela futhi ngeke siphumelele imitha yokulungisa.
Amantombazane e-TC Electronic athathe tech-string tech - isici esikuvumela ukuba ubophe zonke izintambo ku-guitar ngesikhathi esifanayo futhi ufunde ukuhlelwa ngalunye ngokwehlukana - bese ufaka kwisitoreji esincane se-headstock clip. Ngokomlando, i-headstock tuners yiyona engcono kakhulu yokubheja kwezingcingo ze-acoustic, ukulinganiselwa kwesikrini sabo esincane kanye nokwakhiwa kwe-plastic-y. I-Polytune Clip ihlukumeza konke lokho ngokuklama okuqinile nokubukeka kahle. Uma ukhetha ukwenza ukukhishwa kwezintambo olulodwa, ungayifaka emodini yemitha ejwayelekile (nge-+/- 0.5-cent ngokunemba) noma i-strobe imodi imodi (nge-+/- 0.2-cent ngokunemba). Ungakwazi ngisho nokufinyelela izici ze-premium ezengeziwe ze-Pedtune pedal futhi usethe i-tuner ukuba ilandele ukufakwa kwe-capo kwisilungiselelo se-polytune. Yinakho konke okulula nokushesha kwesithombe esijwayelekile-ku-tuner nezici ezikhanyayo.
I-ST8HZ ithatha isimanje esikhumbulini sokuqala. Amamodeli asebekhulile ka-Snark, kufaka phakathi i-SN-1 nge-SN-5s, anikeza ububanzi obubanzi bokubuyisa ubuchwepheshe kusuka kumakrofoni kuya kubafundi bokudlidliza. I-ST8HZ ibahlanganisa yonke into ibe yesikhombimsebenzisi esisodwa esinesimanje-ku-tuner ngokunemba okumangalisayo. Kunembile kangakanani? Yebo, bangeze ukuhlelwa kwe-hertz okusekelwe, okukunika ukucacisa kuseduze ne-+/- cent eyi-0.1, okuyiyo enembile njengoba ungayilindela kunoma iyiphi i-tuner ephezulu ye-line emakethe. Yengeza lokho ekwakheni okuqinile, okubushelelezi ekwakheni ama-rubberized kanye nekhono lokushintshanisa ama-degrees angu-360 angu-super bright (ukuze ukwazi ukuyibeka ngaphambili noma ngemuva kwe-tuner yakho), futhi unesisetshenziswa esincane esiyinkimbinkimbi kakhulu.
Ama-twenty bucks akakwazi ukukuthenga wonke umhlaba ogugu, okungenani uma ufuna izinga. Kodwa uma kuziwa ezenzakalweni, kunomkhakha omusha othakazelisayo owenza umonakalo ngaphandle kwalowo - lapho izinkampani, ngokuvamile ezisekelwe phesheya kwezilwandle, izikhampasi ze-clone ezithandwayo ezithandwa kakhulu, ziphinde zithengise futhi zithengise ngentengo eshibhile, eqondile kuya kubathengi. Umnikeli ungomunye walezo zinto. Ngenkathi ezinye zezinyawo zazo zingabaza (mhlawumbe zigoqa imali engaphezulu ngokuphazamiseka okuphezulu kwe-overdrive), izinto ezifana nebhodi lezinyawo noma i-tuner kungenzeka nje ihlanganise isigaba lapho kulungile khona ukukhipha i-dollar ephezulu.
I-DT-1 yenza konke okudingeka kuyenze, ukunikeza ukulungiswa okuzinzile ngaphakathi kwekhulu lokunemba kuya esikrinini se-LED esikhanyayo ngezibani zokubonisa izinkomba ukufanisa. Kukhona ngisho nokudlula kwangempela ngakho akusizi noma kuphazamise ithoni yakho yegitare. Isikrini, ngenkathi siqhakazile, akuyona into yokubhala ekhaya, kodwa esimweni se-tuner, kuhle. Uma nje ufunda ngokunembile futhi ubonisa ukulungiswa (okuyinto lokhu kwenza), khona-ke kuzokwenza lo msebenzi. I-tuner encane enembile kuhlu, okumele kulindeleke, kodwa ngentengo, ukunemba kwayo kuhle ngaphakathi kokulindelwe.
Isigaba se-tuner esesabekwa kabi futhi esetshenziswa kabi siyi-rackmount tuner. Abadlali abaningi begitala bazokhetha i-pedal noma ngisho ne-tuner-on-tuner ngaphambi kokuba bacabange ukubeka eyodwa endaweni yabo yokudlala. Kodwa, inzuzo yangempela ye-rackmount tuner yukuthi ikunika isibonakaliso eside kakhulu, okusho ukuthi i-tuner inamaphesenti amaningi e-screen real estate ukuzinikezela ekuboniseni i-pitch yakho, okusho ukuthi kusho ukunemba okukhulu nokubukwa okukhulu. Uzokwazi ukubona ngisho nokulungiswa kwamaminithi amaningi okudingeka ukuba uthole isiginci sakho nje. Kule ndawo ohlwini, sizobuyela ku-Korg's Pitchblack range. Ngokweqiniso, azikho lezo zinhlobo eziningi ezenza ama-rackmount tuners, kodwa noma ngabe kukhona okuningi, ubuchwepheshe bukaKorg esikhaleni (bakha i-rackmount tuner yokuqala emuva ku-'87) mhlawumbe beyibeka phezulu ohlwini Izinketho ze-rackmount kungakhathaliseki.
Ungayifaka kwimodi ejwayelekile ye-metered, imodi ye-strobe enembile noma ngisho ne-middle-strobe mode. I-inch rack unit iyindlela yokukhanya ye-ultra, futhi, okusho ukuthi ngeke kube yinkimbinkimbi kuleso simo, futhi awukho embuzweni ukuwudonsa futhi uyisebenzise ngaphandle kwe-rack. Kunemibandela eminingi ehamba phambili nangemuva engeza okunye okuhambisanayo. Okokugcina, i-Korg izama ukuphula umhlabathi owengeziwe ngokubonisa ukukhanya okukhanyayo kwe-3D okunikeza ukuzwa okuthakazelisayo, okunembile, okuphilayo kokuhlelwa kwakho futhi kubukeka sengathi kuhle kakhulu esiteji.
Umnumzane we-"new innovative" we-guitar tuner ohlwini lwethu yi-Roadie 2. Futhi ukwethembeka, ukubiza le nto "i-tuner" kungaphansi kokungakwenza. Akuyona i-pedal, hhayi i-clip-on ngisho ne-rackmount. I-Roadie 2 iyinhlangano yesitoreji kanye ne-robotic okuzenzakalelayo yokushintsha umshini wonke. Izwi layo lilula, kodwa umsebenzi walo uzomangaza abantu abangakaze babone into enjalo ngaphambili. Ukuthatha ikhasi eliphuma encwadini kaGibson ngezinhlelo zabo zokuzulazula kwekhanda elizenzakalelayo, i-Roadie 2 izofunda ngempela umgoqo wezintambo zakho uma uyixhuma futhi ngesikhathi esifanayo uvula indlela encane ngesikhathi esisodwa kuze kube yilapho intambo yakho ihamba kahle. Lokho okushiwo ngempumelelo ukuthi ngeke udinga ukuguqula noma iyiphi i-tuners ngesandla - uzodingeka ubeke idivayisi phezu komshini wokulungisa, ukhiphe ucingo bese uvumela ukwenza wonke umsebenzi.
Njenganoma yiluphi ucezu lwe-tech othomathikhi, kukhona i-curve yokufunda okuncane, futhi kuzodingeka uyiqede kancane lapha, khona-ke unikeze ithuba lokubuyisa futhi uzilungiselele. Kodwa konke kuzo zonke, kungakusiza ithoni yokulungisa isikhathi, futhi kumnandi ukubukela. Baye bakulayisha ngisho nekhono lokuhlela ukulungiswa kwakho kulo, ngakho-ke awunamatheli ukuvumela ukuthi nje uhlabelele isiginci sakho ku-AEDGBE ejwayelekile. Futhi kuthatha imizuzu embalwa nje ukuhlanganisa isiginci esigcwele.
Kulo, abalobi bethu bezobuchwepheshe bazibophezele ekucwaningeni nasekubhaliseni izibuyekezo ezizimele nezihleliwe zemikhiqizo engcono kakhulu empilweni yakho nasemndenini wakho. Uma uthanda lokho esikwenzayo, ungasisekela ngokusebenzisa izixhumanisi zethu ezikhethiwe, okusihola ikhomishini. Funda kabanzi mayelana nenqubo yethu yokubuyekeza .
Ukubukeza kwe-Garmin Connect
Amathiphu wokukhetha i-DVD Player ephathekayo
I-8 Best Greenshotscreen Gants Yokuthenga ngo-2018
I-7 Best Power Inverters Yokuthenga ngo-2018
I-8 Best Golf Tech Yokuthenga ngo-2018
Ama-Best Best Amadivayisi Ama-Amazon Angawathenga Ngo-2018
I-8 Best Code Code Abafundi Ukuthenga ngo-2018
Izipho eziyi-8 ze-Tech Best zokuthenga ngo-2018
I-Best Best Smoke Detectors Yokuthenga ngo-2018
Indlela Yokungavinjelwa kusuka ku-Xbox Live
Indlela Yokukhweza noma Ukushisa isithombe se-ISO ku-Windows 8 naku-Windows 10
Iphrinta ye-HP's SingleWork PageWide Pro 552dw
Ukulondoloza Okuqukethwe kohlu lwadlalwayo lwe-Spotify kufayela lembhalo
Izilungiselelo ezibalulekile ze-routers yenethiwekhi yasekhaya
Indlela Yokufaka Imodi Yamandla Ephansi ku-iPad
Isibuyekezo: I-Helicopter ye-Swann Micro Lightning RC
Indlela yokulondoloza nokulondoloza ama-imeyli ku-Outlook Express
Ukuqhathanisa Izici: i-iPad ngokumelene ne-iPhone ne-iPod touch
Kudinga ukubuyekezwa okusheshayo (XONE)
Indlela yokusesha i-Domain Specific ku-Google
Indlela yokusebenzisa i-Apple Umculo ku-Apple TV
I-HTML5 Ukusetshenziswa kwe-Canvas
I-Web Design & Dev
Vala i-Out-of-Office-Responder ku-ICloud Mail
Ukusetha i-Hardware ne-Sound For a Vista PC
Izindawo 5 zokubheka # Ama-QuotesMotivation & Izithombe
Indlela yokusebenzisa i-Multitasking ku-iPhone
Izilawuli ze-Electronic Throttle Controls
Ama-Ivory Color Meanings
Isikhombisi sokufaka kanye nokusetha uhlelo lwakho olusha
Indlela Yokubuyisela i-iPhone kuya kuzilungiselelo ze-Factory
© 2022 zu.eyewated.com